Okraina: Fanaovana Blaogy, Karazana Fitsaboam-panahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2018 14:53 GMT
(Fanamarihana: lahatsorata anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2012)
Okrainiana iray mpikatroka ho fampihenàna ny vokadratsy sady blaogera, Victoria Lintsova, tao amin'ny tafatafa anaty imailaka iray no nizara niaraka tamin'ny Rising Voice ny fijeriny sy ny heviny mikasika ny fomba nanampian'ny fanaovana blaogy azy sy ny fikambanany. Ny blaogera tena mavitrika indrindra avy amin'ny vondron'ny Fikambanan'ireo Mpisolovava Ny Fitsaboana Fanalàna Fanaintainana ao Okraina (ASTAU) dia mino fa ny fanaovana blaogy dia manampy ny maha-izy azy mba hijoro tsara sy mba hamahana ireo adin-tsaina anaty, ary mandritra izany fotoana izany dia manampy ihany koa ny fikambanany amin'ny fanampiana an'ireo olona miankin-doha amin'ny rongony.
Inty ny tafatafa niarahana tamin'i Victoria.
Q: Azonao lazaina fohifohy aminay ve azafady ny momba anao:
A: 36 taona aho, manan-janaka roa vavy, 19 sy 14 taona. Amin'ny ankapobeny, mino aho hoe manana karazana fiainana tena marisidrisika. Tiako ny asako, miasa ho anà fikambanana roa tsy mampidi-bola aho, izay manao tolotra ara-tsosialy ho an'ireo miankin-doha amin'ny rongony sy ny olona voaporofo fa tratry ny VIH. Matetika, manoratra tononkalo sy tantara nofinofy aho, tiako ireo biby sakaizako. Iray amin'ireo fanambin'ny fiainako ny fiankinandohako tamin'ny rongony, izay nanombohako nandray azy raha vao 18 taona monja aho. Efa ho telo taona mahery izao, nandray anjara tamin'ny fandaharanasa Opiate Replacement Therapy (ORT) – (fitsaboana fanolo ho an'ny rongony mahery) aho ary manome tombony ho ahy ilay fandaharanasa mba hiaina fihatsaràna fahasalamana maharitra sy tsy hampiasa ireo rongony tsy ara-dalàna.
Q: Nahoana ianao no nanapaka hevitra hanomboka ny blaogy, inona no tena antony lehibe mikasika an'izany?
A: Herintaona lasa izay, mpikambana tao amin'ny ASTAU aho ary ny fanaovana blaogy no nanome ahy tombony hialà amin'ireo adin-tsaina anaty sy ny fanamelohantena izay toetra mampiavaka ny olona andevozin'ny rongony ; fanampin'izay, mino aho fa ireo karazana famoronana efain'ny tena dia misy ny tena. Angamba, ho an'ny maha-izaho ahy , ny fametrahana ho anaty soratra ireo eritreritro sy ireo fihetsehampoko dia karazana fitsaboana fanahy izy io, karazana fitaovana iray mba hampivena ahy. Noho izany, ny filàna anatiko no nanosika ahy hanomboka ny blaogy, na dia nitàna andraikitra lehibe koa aza ny tolotra avy amin'ny ASTAU ho lasa mpanangona vaovao ao amin'ny faritra sy mpikatroka an'ny ORT. Matetika aho no manoratra vaovao mifantoka amin'ny fandaharanasa ORT, fa ny ankamaroan'ireo lahatsoratro dia soratako amin'ny maha-mpandray anjara ahy amin'ny fandaharnasa ORT ary maneho ireo fihetsehampoko manokana.
Q: Amin'ny fomba ahoana no hahafahana fanaovana blaogy ho tombony ho an'ny fikambanana sy ny asanao?
A: Araka ny hitako, ny fanaovana blaogy dia mety ho tombony ho an'ny fikambananay amin'ny alalan'ny fizaràna ny vaovao avy amin'ireo faritra misankarazany – taterinay eo amin'ny tranonkalanay ny hoe inona sy aiza no isy mitranga, ny fanambinay, ny fahombiazanay sy ireo zavabitanay, mizara traikefa izahay. Ilainay sy ireo mpandray anjara amin'ny fandaharanasa ORT ary ireo mpikambana amin'ny fikambanana io vaovao io. Fanampin'izay, mitondra ho an'ny vahoaka ireo hevitray ny fahaizamamorona ananany mikasika ny loharano misokatra iray, izay heveriko ho tena manan-danja sy, angamba, mety afaka hanampy amin'ny fanovàna ny toetr'ireo olona hafa manoloana an'ireo andevozin'ny rongony.
Q: Inona avy ireo tanjonareo amin'ny hoavy ary ahoana no fomba hanampian'ny fanaovana blaogy mba hahatontosa azy ireo?
A: Manana drafitra marobe aho miaraka amin'ny ORT, tohanako mafy ny hevitra hoe ireo marary ao amin'ny ORT dia tokony mba handray anjara ao anaty fiarovana ny zon'izy ireo ary hiffotra mafy hanatsara ny kalitaon'ireo fandaharanasa ORT, ary izaho vonona ny hiasa mikasika amin'io ao amin'ny faritra misy ahy. Manana drafitra ny handrakotra ireo vaovao eo amin'ny blaogiko aho. Ary marina mihitsy, rehefa ilaiko ny manoratra mikasika ireo fihetsehampoko manokana, tena manan-danja amiko io.